musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Italy Kuputsa Nhau » Vechidiki Izvozvi Kurwira Dambudziko reMamiriro ekunze muMilan
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Italy Kuputsa Nhau • misangano • nhau • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Federica Gasbarro's Facebook nhoroondo maanoratidzwa naGreta Thunberg. Yakanga iri Nyamavhuvhu 2019 - vese vari muNew York kumusangano wekutanga wevechidiki weUN wezvemamiriro ekunze.
Federica Gasbarro, 26, naDaniele Guadagnolo, makore makumi maviri nemasere, vachange vari vamiriri vaviri veItari kumusangano weYouth28Climate: "Driving Ambition," musangano unotevera wepasirese wevechidiki kurwisa shanduko yemamiriro ekunze.
Musangano unovhura umo Italy ichave iyo yekutarisisa yekukakavadzana uye chirongwa chekudzivirira nharaunda.
Vanenge mazana mana pasi pemakumi matatu nemakumi maviri - maviri enhengo imwe neimwe makumi mapfumbamwe nenomwe yenhengo dzeUnited Nations Convention on Climate Change (UNFCCC) - vachasangana muMilan, MiCo Congress Center, kubva munaGunyana 400-30, 2.
Vasikana nevakomana vatove pahunyanzvi kana kudzidza nzira dzezvakatipoteredza vachange vachitora chikamu.
"Inguva," akadaro Gurukota reEcological Transition, Roberto Cingolani, "umo vechidiki kubva pakuratidzira vanopinda muchirongwa ichi. Dambudziko remamiriro ekunze rinosanganisira kusimbiswa kwekutaurirana kwemarudzi mazhinji. KuMilan, ichave nguva yatichaedza kuita kuti ive yekongiri. ”
Iyo nharo ichave yakakamurwa kuita nzvimbo ina, nechinangwa chekugadzira zvirevo zvekongiri: kuda kwemamiriro ekunze, kugadzirisa zvakagadzikana, kubatanidzwa kwevatambi vasiri vehurumende, uye nzanga inoziva zvakanyanya matambudziko emamiriro ekunze. "Tine tarisiro yakakwira kwazvo," akadaro Federica Gasbarro, "Zvatinofunga zvinomuka kubva kubhuku remibvunzo rakatenderedzwa pakati pevechidiki vechi Italiya vakazvipira munharaunda. MuMilan, tichavagovana neavo venhume dzedzimwe nyika kuti vasvike pagwaro rakafanana. "
Pakati peavo vachataura pachave nevatungamiriri vaviri ve "Chishanu cheRamangwana" - Greta Thunberg naVanessa Nakate. Mangwanani ano, sangano reItari rakadzokera kumudungwe mumaguta akati wandei, richizivisa ratidziro huru yeChishanu, Gumiguru 2, naGreta pacharo munzvimbo yeMilan vachinyunyuta nezvekushaikwa kwehurumende.
Kudzokera kumusangano weYouth4Climate, gwaro rekupedzisira richapihwa vatungamiriri vanosvika muMilan, zvakare kuMiCo, kumusangano wePre-COP26. Iyi yekupedzisira ichaitwa kubva munaGunyana 30 - Gumiguru 2 uye ichatambiswa neMinister Cingolani pamberi paMusoro weNyika, Sergio Mattarella; Mutungamiri Mario Draghi; uye Mutungamiriri weBritish Boris Johnson.
Chiitiko chePre-COP26, icho chakaita seYouth4Climate, chinoitika tichitarisa COP26, musangano weUnited Nations weKushanduka Kwemamiriro ekunze kuGlasgow kubva Gumiguru 31 - Mbudzi 12 takabatana neItari. Kwemakumi matatu emakore, UN yaunza pamwe nyika dzese musangano wezvemamiriro ekunze wepasi rose panguva iyo pazviitiko izvi matanho akakosha akatorwa sekusainwa kweKyoto Protocol muna 1997, uye Chibvumirano cheParis muna 2015. Gore rino, COP26, idzo nyika dzichafanirwa kupa nehurongwa hwakagadziridzwa hwekudzikisa mweya wadzo, dzinoitika pa inguva yakatsiga - mushure mezhizha umo mafashama nemoto zvakaratidza kukurumidzira kupfuura zvisati zvamboitika kuti zviitwe. Vanopfuura vatungamiriri venyika zana nemakumi mapfumbamwe vanotarisirwa muScotland, vakabatanidzwa nemakumi ezviuru zvevatauri, vamiriri vehurumende, mabhizinesi, uye vagari kwemazuva gumi nemaviri ekutaurirana.
COP yega yega yezvekushanduka kwemamiriro ekunze inotungamirwa nemusangano wekugadzirira wakaitwa mwedzi usati wapfuura, chaiye Pre-COP, iyo inounza pamwe mamiriro emamiriro ekunze nemasimba emakurukota eboka rakasarudzwa renyika kuti vakurukure zvimwe zvakakosha zvematongerwo enyika munhaurirano nekudzamisa nyaya dzakakosha. izvo zvichazogadziriswa kuMusangano. Nyika dzinosvika makumi mana kusvika makumi mashanu dzichapinda muPre-COP muMilan nevamiriri veUNFCCC nemasangano ehurumende.
Zvichakadaro, All4Climate inoenderera, chirongwa chakatangwa neMinistry of Ecological Transition uye Connect4mamiriro ekunze eWorld Bank, nekutora chikamu kweLombardy Dunhu neMasipala weMilan. Zviitiko zvinopfuura mazana mashanu zvakarongwa muItaly yese, zvakarongeka mukati megore nemakambani, masangano, masangano eruzhinji, uye vanhu vakazvimirira kuti vazivise nezvemamiriro ekunze. Pakati pezvirongwa muMilan, musi waGunyana 500 paSan Siro Hippodrome, konzati yeMusic30Climate, yakagadzirwa naPianoB, ichaunzwa uye ichave iripo live pa alivemusic.tv.